Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Caafimaad Qabka Hooyada. - Cakaara News
Munaasabad Lagu Xusayay Maalinta Caafimaad Qabka Hooyada.
Jigjiga,(CN) isniin, 8da, February, 2016, Munaasabad balaadhan oo lagu xusayay maalinta caafimaad qabka hooyada oo uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka DDSI ayaa ka dhacday barxada wayn ee xafiiska caafimaadka DDSI.
Waxaana ka soo qaybgalay munaasabadaasi madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah marwo Sucaad Ahmed Faarax, wasiirka caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid Maxamed, wasiirka xafiiska haweenka iyo caruurta DDSI marwo Raxma Suldaan Maxamuud Haybe, gudoomiyaha golaha sare ee arimaha islaamka DDSI mudane sheikh Cabdiraxmaan Xasan, shaqaalaha xafiiska caafimaadka DDSI qaybka mid ah kooxaha fanka iyo sugaanta DDSI iyo marti sharaf kale.
Munaasabadan lagu xusayay maalinta caafimaad qabka hooyada oo socdaal ay ku muujinayeen munaasabadan masuuliyiinta iyo shaqaalaha ka soo bilaabeen xafiiskii hore ee madaxtooyada DDSI kuna yimaadeen xafiiska caafimaadka DDSI oo ahayd halka lagu xusayay.
Waxaana ugu horayntii ka ka hadashay munaasabadaasi madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah ee DDSI marw Sucaad Axmed Faarax oo ka warbixisay ahmiyada munaasabadan iyo dadaalada dheer ee xukuumada DDSI iyo xafiiska caafimaadkuba ugu jiraan kor u qaadida adeegyada caafimaadka waxaana ka mid ahaa madaxwayne ku xigeenka hadalkeedii” si loo hirgaliyo qorshaha GTP2 ee ku salaysan dhinaca adeega caafimaadka oo tayaysan taasi oo sal looga dhigay qorshayaal kor loogu qaadayo dhimista dhimashada hooyada iyo dhalaanka si taaasi loo xaqiijiyo loona hirgaliyo ayaa waxaa loo baahan yahay in hooya kasto oo uurlihii ugu yaraan afar jeer la xidhiidho xarumaha caafimaadka si ay u hesho xanaanada hooyada uurka leh, kuna umusho xarumaha iyo cusbitaalada oo kaliya, iyada oo hooyadu ka faa’iidaysato daryeelka caafimaadka dhalmada ka dib islamarkaana isticmaasho nidaamka kala fogaynta caruurta” Sidoo kale waxay kula dar-daarantay xirfadlayaasha caafimaadka in ay u naxariistaan, xushmeeyaana hooyada marka ay adeega caafimaadka siinayaan.
Wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane Cabdifataax Siciid Maxamed oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa sheegay in bisha dir dalkeenu u qaatay bisha caafimaad qabka hooyada sanadkan 2008TTI halku dhig looga dhigay “si naxariis, xushmad iyo qadarin leh u daryeel hooyada” islamarkaana laga xusayo dhamaan goobaha caafimaadka ee dalkeena itoobiya. Wuxuuna ku booriyay dhamaanba xirfadlayaasha caafimaadka meelkasta oo ay joogaanba in ay bulshada ugu adeegaan si muwaadinimo.
Dhankooda wasiirka xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta marwo raxma suldaan maxamed haybe iyo gudoomiyaha golaha sare ee arimaha islaamka mudane sheikh Cabdiraxmaan Xasan Xuseen ayaa si qoto dheer uga warbixiyay ahmiyada ay maalintani leedahay waxayna sheegeen in hooyada mudan tahay markasta in la xushmeeyo, la qadarin islamarkaana hesho dareel caafimaad oo tayo leh.
Munaasbadan ayaa intii ay socotay waxay ka soo qaybgalayaashu ugu deeqaan dhiigooda si ayna hooyana dhiig bax u dhimanin. Ugu danbayntii waxaa munaasabadaasi abaalmarino lagu gudoonsiiyay hooyooyinkii ku umulay bishan dir xarumaha caafimaadka ee maamulka magaalada jigjiga.